Buyisela ukumiswa kwedeskithophu yakho i-KDE 4 | Kusuka kuLinux
Iziteshi | | Kunconyiwe, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Ozakwethu abahle kakhulu, ngizokwabelana nawe ngento engiyifundile ukwenza ukuzivumelanisa ne-KDE kube lula kubasebenzisi abasha abangaphathi amathuluzi wedeskithophu e-KDE 4 Plasma.
Kuvela ukuthi noma nini lapho ngifakela i-KDE umuntu ongakaze ayisebenzise, ​​kugcina kususe izinto ezibonakalayo zamapaneli, noma okubi kakhulu, iphaneli lonke.
Lokhu kuyinto ejwayelekile njengoba kulula ukuvula izinto zemifanekiso bese ususa okuthile ngephutha.
Ukuba ngumsebenzisi omusha we-KDE (futhi kungahle kuvele ku-Windows), ngeke kube lula ukubeka i-graphic element noma iphaneli endaweni yalo, futhi ideskithophu kungenzeka ingasebenziseki ngoba ususa imenyu yezinhlelo zokusebenza, ithreyi yohlelo noma umphathi womsebenzi uqobo.
Ngemuva kwalokho lowo msebenzisi uzokushayela bese akutshele: "Hheyi, iphaneli yami ihambile, ngenzani ukuze ngiyibuyise?"
Yebo, yilokho engizozama ukukuchazela ngakho kulesi sifundo esincane. Beka kumongo, ake sifike ephuzwini:
Indlela elula yokuphinda uthole iphaneli esebenzayo inenketho ethi "engeza iphaneli entsha ezenzakalelayo", kepha kuthiwani uma sikushiyele ideskithophu ebanzi futhi sifuna ukuyibuyisa kalula?
Ake sibheke: Izindlu ze-KDE 5 zokumiswa kwamafayili wezinto zokubukeka nezideskithophu okuyizinto esizidingayo.
Bangene /home/usuario/.kde/share/config/ (Okungenani akhona eDebian Wheezy, kokunye ukusatshalaliswa uma engekho kufanele kube ngokufanayo).
Yebo kuleyo folda sibheka izinhloso zethu, lawa mafayela ama-5:
Sesivele sinazo. Lawo mafayela anokulungiselelwa okunikeze ideskithophu ngokubukeka nokusebenza.
Manje sizowakopishela kufolda lapho ziphephe khona, ngokwesibonelo sakha ifolda ebizwa ngokuthi ukubuyisela kumsebenzisi wethu bese ukopisha ngaphakathi kwamafayela ama-5.
Kulungile, manje sibheka kumlingo wemibhalo ye-bash. Sakha ifayela lombhalo elisha elibizwa ngokwesibonelo: buyisela i-desktop.sh futhi siyinika imvume yokukhipha. Sivula ngesihleli sombhalo bese sibhala okulandelayo ngaphakathi:
Qaphela: Izindlela kufanele zifane nezesistimu yakho, ukuze amafayela abuyiselwe kanye namafayili wokumiswa kwe-KDE.
Ilungile. Ukuchofoza kabili kulelo fayela kuzobuyisa amafayili wokumiswa kwedeskithophu bese ungena ngemvume ukuze ushintsho luqale ukusebenza.
Khumbula ukugcina lokho okuvulile ngaphambi kokukusebenzisa ukuze ungalahli lutho ongakulondolozanga lapho uvala iseshini.
Manje lapho lowo msebenzisi ekubiza osuse okuthile okuyingcaca noma iphaneli ethi angenzani ukuze akubeke njengoba kwakunjalo, kufanele umtshele nje: vula ifayela ululame ideskithophu.sh engilondoloze kudeskithophu futhi yilokho!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Kunconyiwe » Buyisela izilungiselelo zakho zedeskithophu ze-KDE 4
Kuhle kakhulu bekungangikhonza kakhulu lapho ngimane ngifaka i-kde eyehlele kimi ngqo = xD kungibize ukubuyisa amaphaneli nezinye izinto kepha ngakuphatha kepha imibhalo yakho ifana negilavu ​​kumabhukumaka uma kwenzeka umngane kwenzeka yena: p
I-athikili enhle kakhulu futhi iyadingeka kuma-newbies hhayi ama-newbies njengami. 🙂
Ngizokwabelana ngayo nezikweletu zakho.
kwamanye ama-distros ifolda yi ~ / .kde4 /…
Ithiphu enhle. Futhi, lolu hlobo lwe-misstep aluzange lwenzeke kimi nge-KDE 4.
Into enhle ngemibhalo, kwesinye isikhathi lapho ngivele ngazama i-KDE futhi yangaphatha imvelo, ngavele ngasusa ifolda .kde nayo yonke into yabuyela kokuzenzakalelayo. Impela kukhona okucwengisiswe kancane kepha ngaleso sikhathi kungisebenzele hehe. Siyabonga ngethiphu.
Kwesinye isikhathi lo ngumbono omuhle, uma une ~ / .kde4 / ebikade inezibuyekezo eziningi ze-KDE4.
Kwake kwadingeka ngiyenze ngivuleSUSE, ngibe nokumiswa okufanayo kusuka kuzinguqulo zokuqala ze-KDE4, kwenziwa ezinye izinguquko ezinkulu futhi kungcono ukuqala phansi.
Siyabonga ngolwazi. Angikaze ngilungise i-plasma, kepha akuyona into eningi kakhulu engingayazi.
Kufanele ucele abantu be-KDE ukuthi balondoloze izakhiwo zedeskithophu (okuzenzakalelayo kwesistimu noma okwenziwe ngumsebenzisi).
Okufanayo kungenziwa ngemisebenzi, kodwa bambalwa abantu abayiqondayo.
Ngiyabonga ngokwabelana, kuzoba wusizo kimi.
Ngiyajabula ukuthi ilusizo kuwe.
Ingasetshenziselwa ukuzama ideskithophu bese uyibuyisa ngokushesha njengoba yayinjalo.
… Noma ukuze kube nokulungiselelwa okuningana, isibonelo okukodwa okukhona ethekwini, okunye okunomphathi womsebenzi, njll. Futhi ushintshe kalula phakathi kwazo kuye ngomcimbi.
Qaphela: uma usebenzisa lawa mafayili ukonga ukucushwa kwakho futhi ukukubuyisela kwenye ikhompyutha noma kwenye ukufakwa kwe-Linux, qaphela ngoba ifayili le-plasmarc liqukethe imininingwane yokubeka ingqikithi ethile ye-plasma. Kuzofanele ukuthi ufake itimu efanayo ye-plasma noma weqe ifayela le-plasmarc ukuze ukwazi ukusebenzisa itimu ehlukile lapho ubuyisela ukumiswa kwakho.
Okunye engikuqaphelile ukuthi ezikhathini ezimbalwa kwenzeka ukuthi ukususa into ethile yomdwebo kungayibuyisi kahle, uma kunjalo iphaneli lonke kufanele lisuswe ngaphambi kokubuyiselwa.
UCarlos Felipe kusho
Akulula yini ukukopisha ukwenziwa kwesipele bese ukunamathisela ku- / home /usuario/.kde/share/config/ uma sibhebhana kudeskithophu yethu noma bekungeke kusebenze?
Phendula uCarlos Felipe
Uyazi ukuthi iyasebenza yini ne-KDE 5 Plasma?
[Linuxea your Windows] From Windows - Part II: Bash in Windows (Nezithombesizinda ezimbalwa zami)